အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက် Archives | Page 41 of 48 | Frontier Myanmar
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ အခုဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးဆန်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကြီးတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ၄ နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မူဆလင်တွေ နှစ်ဖက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြားက ပဋိပက္ခတွေ ပြေလည်မှု မရသေးတဲ့အပြင် တခါတရံ ပြဿ နာ မီးစတွေ ပိုပြီး.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး၊ ဘာ အခက်အခဲတွေ တွေ့နိုင်သလဲ
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ နဂို ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသလိုပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး အတွက် သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် အကောင်အထည် ဖော်နေပါပြီ။ လက်ရှိ သူ အကောင်အထည်ဖော်မယ့် ကိစ္စတွေကတော့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို အမြန်ဆုံး ခေါ်ယူမယ့် ကိစ္စ၊ အရင် သမ္မတ.
အရင်အစိုးရလက်ထက် စီးပွားရေးစာချုပ်တွေ ပြန်ပယ်ဖျက်ရင် ဘယ်လို ဖြစ်လာနိုင်မလဲ
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၂ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ဧရာဝတီတိုင်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ဒေါက်တာစံရွှေဝင်း တင်သွင်းထားတဲ့ ရန်ကုန် လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းထောင့်က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် နေရာမှာ စင်ကာပူ Parkway pantai ကုမ္ပဏီ နဲ့.